स्वास्थ्य – Page2– Sabaikoaawaj.com
अनियमितता, बेथिति र कुशासनसँग सम्बन्धित विषय आजका मुख्य दैनिक पत्रिकाहरूको हेडलाइन बनेको छ । कान्तिपुरले बिनायोजना सञ्चालन गरिएको भनेर आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले ऋण लिने गृहकार्य थालेकोलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार, विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १ लाख २० मिलियन डलर (१३ अर्ब …
आजका पत्रपत्रिका बाट
पुरुषलाई किन हुन्छ कम्मरमुनि दुखाइ?
प्रायः सबै पुरुषले आफ्नो जीवनकालमा एकपटक कम्मरमुनिको दुखाइको अनुभव गरेका हुन्छन्। कम्मरमुनि दुख्नुमा मुत्र प्रणाली, प्रजनन् प्रणाली तथा प्रोस्टेटको समस्याले हुन्छ। यो जानकारी आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा डा.अनिलपुकार साहले लेखेका छन्। पिसाब पोल्नु पिसाब पोल्नुलाई कम्मरमुनिको दुखाइको मुख्य कारण मानिन्छ। पिसाब संक्रमण, प्रोस्टेटको आकार बढ्नु तथा मूत्रथैलीमा मासु पलाउनाले पिसाब पोल्ने गर्छ । छिटो–छिटो पिसाब …
आजका पत्रपत्रिका: मौद्रिक नीतिले ऋणको व्याजदर सस्तिने, दुईवटा वाइडबडी कालोसूचीमा
आजका दैनिक पत्रिकाहरूको ‘हेडलाइन’ बाढी पहिरो र राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति बनेको छ । यसबाहेक स्मार्ट लाइसेन्स, विद्युत् निर्यात, कालोसूचीले नेपाल वायु सेवा निगमलाई पारेको असरलगायत विषय पनि पत्रपत्रिकाहरूले उठाएका छन् । कान्तिपुरले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ल्याइएका व्यवस्था हुबहु कार्यान्वयन भए ऋणको व्याजदर सस्तिने …
नेपालले ‘विषादीजन्य’ तरकारी रोक्दा भारतले ‘औषधिजन्य’ वस्तुमा लगायो रोक, नेपाली राजदुतद्वारा ध्यानाकर्षण
नेपालले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्न थालेपछि भारतले नेपालबाट निर्यात हुने जडिबुटीमा विभिन्न बहानामा रोक लगाएको छ । जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्ने विषादीजन्य तरकारी तथा फलफूल भित्रिन नदिन नेपालले कडाइ गर्दा भारतले भने औषधिजन्य जडिबुटीमा ‘प्रतिक्रिया’स्वरुप कडाइ गर्नु अनौठो मानिएको छ । भारतले …
मानिसहरू भन्छन्– खाना खाँदा पानी खानु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छ । खानासँग पानी पिउनाले शरीरमा टक्सिन जम्मा हुन्छ । जसकारण मानिस बिरामी पनि पर्न सकिन्छ । के खानासँगै पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक होला त ? स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार खानासँगै पानी पिउनाले स्वास्थ्यमा कुनै नकारात्मक असर पर्दैन । वास्तवमा …
‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात्।’ यो उक्ति नेपाली समाजमा निकै प्रचलित छ। बेल पाक्दा कागलाई हर्ष होस् या बिस्मात, तर मानव जीवनमा भने बेल पाक्न थालेपछि बिस्मात होइन्, हर्षको बहार नै छाउँछ। बेल यस्तो फल हो, जसले शरीरका सम्पूर्ण भागलाई हित मात्र पुर्‍याउँछ। गर्मी मौसममा यसका फाइदा त झन् …
सङ्गीतले घटाउँछ एन्जाइटी
एजेन्सी: वर्तमानको प्रविधिमय दुनियाँ र चरम भागदौडको अवस्थामा एन्जाइटी जोकोहीलाई हुन सक्छ । अधिक औषधिको प्रयोग पनि खतरनाक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एन्जाइटी अर्थात् बेचैनीलाई टाढा भगाउन सङ्गीत लाभदायी हुने पछिल्ला अध्ययनहरुले देखाएका छन् । पीडा कम गर्ने औषधिको काम सङ्गीतले गर्न सक्ने अनुसन्धाताहरुको दाबी छ । ‘नर्भ ब्लक प्रोसिजर’भन्दा …
आजका पत्रपत्रिका: अमेरीका र भारत प्रति नेकपा नरम
पूर्वजन्मको पाप होइन छारेरोग
छारेरोग मस्तिष्कमा हुने एक प्रकारको रोग हो। यो रोग लागेका व्यक्ति बेलाबेलामा मुर्छा परेर ढल्ने गर्छन्। विश्वमा ५ करोड मानिसमा छारेरोगको समस्या छ भने तीमध्ये ८० प्रतिशत बिरामी नेपाललगायत गरिब देशहरुमा छन्। नेपालमा छारेरोगका बिरामी कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक त छैन तर १ प्रतिशत मानिसमा यो समस्या भएको अनुमान …